Ahoana ny fanadiovana ny console Xbox One nefa tsy manimba azy - VidaBytes | LifeBytes
Networks ao amin'ny tambajotra | | teknolojia
Iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny fananana Xbox ny fitazonana azy io ho madio sy hiasa, indrindra hialana amin'ny fahasimban'ny atitany amin'ny fananganana vovoka. Eto izahay dia hampianatra anao ny fanadiovana Xbox One:
Mba hanadiovana ny ivelan'ny Xbox One dia ampiasao lamba microfiber hanesorana ny dian-tànana, ny loto na ny tasy hafa. Ity dia tokony hanala ihany koa ny ankamaroan'ny vovoka izay miangona matetika amin'ny fitaovana elektronika, indrindra ireo izay voatahiry ao anaty lalimoara na eo ambanin'ny toeran'ny fahitalavitra.
Ho fanampin'ny fisehoana ivelany, dia mety ho tsikaritrao fa mitabataba bebe kokoa ny mpankafy console anao aorian'ny fampiasana ora maro. Ho an'ny sasany, ity hetsika mitabataba ity aza dia miteraka filalaovana miadana na olana hafa.
Mba hanitsiana an'io dia ampiasao amina kapoaka misy rivotra azo esorina hanesorana ny vovoka. Alao antoka fa esory ny fitaovana alohan'ny hanombohanao fanadiovana hisorohana ny fahasimbana na ratra bebe kokoa.
Microsoft dia tsy mamporisika anao hanandrana hanokatra ny lalao console ary mamporisika anao hangataka fanampiana matihanina amin'ny fanamboarana anatiny. Tsy toy ny Xbox 360, ny Xbox One dia tsy manana faceplate azo esorina. Mampitandrina ihany koa i Microsoft amin'ny fampiasana karazana fanadiovana ranon-javatra, satria na ny fampiasana am-pitandremana aza dia mety hitarika fahasimban'ny hamandoana amin'ny rafitry ny rivotra.
Torohevitra momba ny fanadiovana Xbox One
Ity ny fomba fanadiovana ny Xbox One, miaraka amin'ireo fitaovana ilainao hanaovana azy.
Atsaharo ny Xbox One anao.
Atombohy amin'ny fampiasana lamba microfiber manadio ny ivelany ivelany. Ireo matetika dia lamba fitaratra mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny solomaso. Ny dikanteny hafa amin'ny fanadiovana dia antsoina hoe lamba vovoka.
Ampiasao ny lamba mba hanadiovana tsara ny ivelany ny console, ao anatin'izany ny ambony, ambany, aloha, aoriana, ary ny sisin'ny fitaovana. Ny fanadiovana mahazatra dia hisorohana vovoka be dia be tsy hangonina, izay mety mitaky lamba maromaro hanadiovana tsara ny fitaovanao. Mampiasà fihetsiketsehana boribory mba hikosohana ny dian-tànana na ny tasy amin'ny faritra plastika ao amin'ny fitaovanao, ao anatin'izany ny eo aloha sy eo ambony.
Aorian'ny fanadiovana ny ivelan'ny Xbox One anao, Mampiasà kapoaky ny rivotra voafatotra mba hanapoahana tsara ny fananganana vovoka fanampiny ao anaty seranana. Ireo boaty ireo dia azo vidiana amin'ny karazany mora vidy na lafo kokoa.
Na inona na inona karazana ampiasainao, ampiasao ny fipoahana fohy hanesorana ny fananganana eo amin'ny seranan-tsambo any aoriana sy ny lavaky ny console. Hamarino tsara fa nesorinao ny fitaovana alohan'ny nanadiovana ny seranana aoriana.
Mandehana miampita ny ivelany indray miaraka amin'ny lamba manala vovoka nipetraka teo amin'ny fitaovanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » Ahoana ny fomba fanadiovana ny console Xbox One nefa tsy manimba azy
PS4 ny konsoly faharoa be mpividy indrindra amin'ny fotoana rehetra
Inona no ataon'ny Smart TV